မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: ရခိုင်ပြည်တွင်း အဓိကရုဏ်းများအပေါ် ယူကေရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ရခိုင်ပြည်တွင်း အဓိကရုဏ်းများအပေါ် ယူကေရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
Wednesday, June 06, 2012 ရခိုင်ပြည်တွင်း အဓိကရုဏ်းများအပေါ် ယူကေရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် မိမိတို့တိုင်းပြည်သည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်ထောင် စုနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ် ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ အေးအတူပူအမျှ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာကြသည်။ ရန်းဗြဲကျွှန်း မုဒိမ်းမှုသည်လည်းကောင်း တောင်ကုတ် လူသတ်ပွဲသည်လည်းကောင်း လူမဆန်သော ရာဇဝတ်မှုများဖြစ် သဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များသည် ယနေ့ကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းပြီး မိမိတို့တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်ချီတက်နေချိန်တွင် မလိုလားအပ်သော နိုင် ငံရေး လှည့် ကွက်များဖြစ်ပေါ်လျှက် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်စရာ ဖြစ်ရပ်များအဖြစ် လွန်စွာစိုးရိမ် ပူပန်မိကြသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များသည် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အလွန်လက်မခံနိုင်သော ရာဇဝတ်မှု များသာ ဖြစ်သည့် အလျှောက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ အရေးယူဖြေရှင်းပေး ပါရန် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း အား လေး နက်စွာတိုက်တွန်းပါသည်။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဆက်လက်မကြီးထွားလာစေရန် နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ဘာသာရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် နားလည်မှုများ ရရှိလာစေရန် အထူးကြီးကြပ်စီမံ၍ အရေးတယူဆောင်ရွက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ နေ့စွဲ။ ဇွန် ၅၊ ၂၀၁၂။ ပါဝင်သောအဖွဲ့ အစည်းများ 1. International Burmese Monks Organization 2. NLD LA,UK 3. Women of Burma, UK 4. Arakan Community 5. Burma Democratic Concern 6. Chin Community, UK 7. Kachin Nation Organization 8. Karenni Community 9. Burmese Democratic Movement Association 10. Oversea Shan Association 11. Arakan Rohingya National Organization 12. Burmese Rohingya Organization, UK 13. Burmese MuslimAssociation Organizatons in UK Denounce the Riots in Burma (Myanmar) Organizatons in UK Denounce the Riots in Burma (Myanmar)